Wararka - Astaamaha tuubada PE iyo baaxadda isticmaalka
Nidaamka bullaacadaha iyo biyaha, tuubooyinku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah, markaa tayada dhuumaha ayaa door muhiim ah ka ciyaara. Laga soo bilaabo waayo-aragnimadii hore, marka la barbardhigo balaastigga ama dhuumaha birta, tuubooyinka pe waxay leeyihiin astaamaha soo socda:
Density Cufnaan hoose, xoog sare, adkaansho wanaagsan;
Is Waa daxal adkaysi u leh, midabkeedu sahlan yahay, oo wuxuu leeyahay aalado dahaadh wanaagsan.
Construction Dhisid ku habboon, rakibid fudud oo dhakhso leh, iyo kharash dayactir oo hooseeya.
Iyada oo ku saleysan seddexdan faa iidooyin ee tuubada PE, waxaa loo isticmaali karaa nidaaminta biyo bixinta iyo dheecaanka, biyaha waraabka beeraha, gaadiidka macdanta ee miinooyinka, iyo kululaynta gaaska
Ka dib faham kooban oo ku saabsan faa'iidooyinka tuubbooyinka PE, aan ku taxno sida ay hadda wax u socdaan. Wadamada horumaray iyo gobolada dibada, Tuubooyinka PE waxay leeyihiin in kabadan 90% dhuumaha gaaska ee aasan ee magaalooyinku aasan yihiin, saamiga suuqa ee dhuumaha biyaha keena ayaa gaaray 60%, wadamada shisheeyana waxay sameeyeen dhuumaha PE aad u bislaaday. Heerka qeexida dhismaha. Maaddaama tuubooyinka galvanized-ka si tartiib tartiib ah looga mamnuucay Shiinaha, dhuumaha PE waxay leeyihiin faa'iido tartan ah dhinacyada dhismaha biyo-gelinta. In warshadaha sida gaaska, biyaha warshadaha, isgaarsiinta, iyo waraabka beeraha, tuubooyinka PE ayaa sidoo kale muujinaya isbeddel degdeg ah koritaanka. Heerarka tuubbada iyo qeexitaannada lama sii haynin, taas oo saameyn ku yeelatay dalabka iyo horumarinta tuubooyinka PE illaa xad.
Waxaa jira habab badan oo loo kala sooco tuubooyinka PE, waxaana jira habab kala-soocid kala duwan sida waafaqsan heerar kala duwan. Ujeedada awgeed, waxaa loo qaybin karaa dhismaha iyo bixinta biyaha degmada iyo dhuumaha bullaacadaha, tuubooyinka gaaska banaanka, dhuumaha waraabka beeraha, dhuumaha dunta, tuubooyinka bullaacadaha, iwm. Marka loo eego tayada iyo qaab dhismeedka, dhuumaha PE waxaa loo qaybin karaa PE caadi ah. tuubooyin, aluminium-caag tuubooyin isku dhafan, tuubooyin isku-dhafan bir-caag ah, tuubooyin isku-dhafan bir-caag ah, tuubooyin la xoojiyay, tuubooyin jiingado ah oo isku mid ah / laba-derbi ah, tuubooyin muquun ah, silikoonada aasaasiga ah ee fiilooyinka indhaha, iwm. Marka loo eego cufnaanta alaabta ceeriin, waxaa loo qaybin karaa tuubooyin cufan oo sarreeya, tuubooyin cufan oo hooseeya iyo tuubooyin dhexdhexaad ah.